Igwe eletriki eletriki maka ụgbọ ala na ụgbọ ala eletriki, ụlọ ọrụ ikuku na-alọghachi ugboro abụọ na ndị nrụpụta | ABG
ESD usoro igwe ikuku ikuku ohuru bu udiri ulo nke ikuku, nke nwere udi di iche iji tinye maka ugbo ala eletrik site na 8m rue 12m. Usoro ESD na-akwado ọtụtụ teknụzụ nhọrọ dị iche iche, dị ka teknụzụ njikwa igwe ojii, njikọ dị elu nke na-egbochi teknụzụ, teknụzụ ụlọ ejikọtara batrị na njikwa teknụzụ (BTMS), teknụzụ njikwa ụgbọ ala, teknụzụ ọkụ ọkụ DC750, teknụzụ nke mbelata mmiri, teknụzụ nke ikuku dị n'ime bọs na onye na-azọpụta alloy alloy.
ESD Series, ikuku nloghachi ikuku, maka 8-12m E-bus
SONGZ ọgụgụ isi Electric Modular Architecture (SIEMA) Structure
Intelligent modular n'elu ikpo okwu imewe (SONGZ SIEMA3 n'elu ikpo okwu), nke na-ahụta modular imewe na Nchikota compressor, eletriki akara, condenser na evaporator, ike thermal management usoro na wdg The ngwaahịa imewe bụ oru oma na a pụrụ ịdabere na, na izugbe ọnụego nke n'elu ikpo okwu ngwaahịa akụkụ ahụ mapụtara. nwere ike iru 72%.
Nka na ụzụ nkọwapụta nke Electric Bus A / C ESD Series:
:Dị: ESD-III-BNSD ESD-IV-BNSD ESD-V-BNSD ESD-VI-BNSD
Ike jụrụ oyi Ọkọlọtọ 16kW 18kW 20kW 22kW
Mgbasawanye Mgbasa Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
Ikuku Ikuku Ikuku (Nsogbu Zero) Condenser (Fan ibu) 6000 m3 / h (3) 8000 m3 / h (4) 8000 m3 / h (4) 10000 m3 / h (5)
Evaporator (ikuku mmiri) 4000 m3 / h (4) 4000 m3 / h (4) 5400 m3 / h (6) 6000 m3 / h (6)
Unlọ Unit Akụkụ 2670 * 2000 * 278mm 3170 * 2000 * 278mm 3170 * 2000 * 278mm 3170 * 2000 * 278mm
Ibu ibu 244kg 265kg 270kg 271kg
Oriri eletrik 6.7kW 7.5kW 8.4kW 9.2kW
Igwe nju oyi .Dị R407C R407C R407C R407C
Ozi teknụzụ ESD-III-BNSD Ozi teknụzụ ESD-V-BNSD Ozi teknụzụ ESD-VI-BNSD
1. Ntinye ike voltaji nke ikuku ikuku nwere ike imeghari DC250-DC750V, na voltage njikwa bụ DC24V (DC20-DC28.8). Usoro ESD adịghị adabara maka trolleybus.
Igwe mmiri na-akwụ ụgwọ ọkụ bụ 7℃-15℃, mmiri na-ekpofu mmiri dị 11℃-20℃, na-akwụ ụgwọ ≤10Kw, n'ihapu ≤1-3Kw, Compressor kwesịrị iji High compressor.
The ESD Series E-Bus AC Function Upgrade （Nhọrọ）
1.Intistic modular platform design (SONGZ SIEMA3 platform), na-ahụta ihe dị iche iche nke compressor unit, usoro nchịkwa eletriki, usoro ntụgharị, evaporator, condenser, wdg, na imepụta ihe dị mma ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya.
2.Lightweight design, aluminum alloy bottom sheel design, ele mmadụ anya n'ihu imewe nke condenser, Compressor na akara oghere, aluminum integrated Compressor, 30% Mkpa ọkụ.
3. Nzube ụlọ zuru ezu nke ikuku ikuku nwere obere njikọ, obere ndozi, obere nha, na ọdịdị mara mma; nhazi nke ikuku na-eme ka ikuku zuru oke nke ulo ndi ozo iji meziwanye ike nke oru nke oru.
4. Ugwu ahụ dị elu na-eme ka mbelata mkpọtụ pụrụ iche na ntinye mwepụta sistemụ nke mmụba nke abụọ. N'etiti nyiwe niile, ikpo okwu a nwere mkpọtụ kachasị dị ala, usoro kachasị mma yana ogo arụmọrụ kachasị elu.
5. EMC nke ngwaahịa a na-emezu ihe GB / T 18655 dị na ọkwa 3, usoro ahụ na-ewepụ ikike ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe ya, nke dị nchebe ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, ma gafere asambodo ọkọlọtọ EU.
6. The Compressor adopts DC ugboro akakabarede (na-adịgide adịgide magnet synchronous) technology, jikọtara na agbanwe ugboro akakabarede akara, elu-ọgwụgwụ ngwaahịa na-onwem na electronic mgbasa valves, kpọmkwem akara, ike ịzọpụta, ala na environmentally friendly.
7.The electric akara adopts ihe niile na-na-otu imewe, nke ọma belata ohere nwere site eletriki layout, na wiring njikota imewe mara mma.
8. Ike batrị arụ ọrụ njikwa ọrụ, na-ewepụta ikike jụrụ batrị 3-10kw dịka ihe ndị ahịa chọrọ na-enweghị na-emetụta mmetụta jụrụ oyi nke ụgbọ ahụ.
9.Air ọcha ọrụ, gụnyere anọ ọrụ: electrostatic ájá collection, ultraviolet ìhè, ike ion generator, na foto catalyst filtration, iji nweta nwoke ịga ụlọ ọgwụ, isi mwepụ na oru oma ájá mwepụ, na n'ụzọ dị irè gbochie nnyefe nke nje.
10. "Cloudgwé ojii na-achịkwa" ọrụ, na-achọpụta na ime akara na nchoputa, ma melite ọrụ ngwaahịa na nlekota ike site na nnukwu data ngwa.
11. PTC kpo oku eletrik, dịka nhazi dị iche iche na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, bido PTC n'oge, nyere aka kpo oku, ma ghọta kpo oku na oke okpomọkụ.
Nke gara aga: Igwe eletrik eletrik maka ụgbọ ala eletrik na nchịkwa, Single Air Return
Osote: Electric Bus Air Conditioner for Electric Double Decker Bus
Ntụ oyi maka ụgbọ ala eletrik